Adventure Escape: Asylum 32 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 32 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Adventure Escape: Asylum
Adventure Escape: Asylum ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
- Uncover the mystery of Anna’s past!
Anna ကသူမ၏အတိတ်၏မြူဆိုင်းလျက်ရှိသောအမှတ်တရများနှင့်အတူတစ်ဦးခိုလှုံခွင့်အတွက်တစျနေ့ကနှိုး။ မကြာခင်မှာပဲသူကတစ်ခုခု Byers Institute မှမှာသိပ်ကိုမှားယွင်းတဲ့သွားပြီဟုကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ တကယ်တော့၌, မြည်းကြိုးကိုဖြည်အပေါ်တစ်ဦးလူသတ်သမားအဲဒီမှာပါ! သူ Anna မှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားပါတယ်ကဲ့သို့၎င်း, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မိန်းကလေးတစ်ထောကျအကူပွုသတိပေးချက်များနှင့်အတူပေါ်လာဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးက Anna ရဲ့ဥပဒ်တစ်ခု figment ဖြစ်သနည်း သို့မဟုတ်သူမသိတယ်ခြင်းထက်သူ Anna ရဲ့အတိတ်ဖို့ပိုရှိသနည်း
ပျြောရှငျတဲ့စွန့်စားမှုနဲ့ Escape ကစားသမားတွေသန်းပေါင်းများစွာ join နှင့်သင်ခိုလှုံခွင့်၏နက်နဲသောအရာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လျှင်ကြည့်ရှုကြလော့
- တင့်တယ်ဂရပ်ဖစ်ဘဝကိုမှသရဲခြောက်တဲ့မြင်ကွင်းများကိုဆောင် ခဲ့. ,
- ကိုခိုလှုံခွင့်ခိုင်ခိုင်လုံလုံ Explore နှင့်ဤကလေးငယ်သည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရာအရပျနောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းပြန်လည်ပျက်ပြယ်!
- အပြီးအစီး 10 အခန်းကြီး - အားလုံးအခမဲ့ - တမူထူးခြားတဲ့ထွက်ပေါက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူအသီးအသီး!
- သူ Anna ရဲ့အတိတ်၏နက်နဲသောအရာကိုဖှငျ့!
- ဒါဟာအခမဲ့ဖြစ်သည်! အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်ရေးရုံမျှမလုပ်ရတဲ့ download, နဲ့ကစား။
စွန့်စားမှုနဲ့ Escape ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်: ခိုလှုံခွင့်။ ကိုခိုလှုံခွင့် Explore နဲ့ Anna သူမ၏ပျောက်ဆုံးနေသောအမှတ်တရများ recover ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကလေးတို့လွတ်မြောက်ရန်နိုင်သလား?
Adventure Escape: Asylum အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Adventure Escape: Asylum အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Adventure Escape: Asylum အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Adventure Escape: Asylum အား အခ်က္ျပပါ
discorally စတိုး 239 184.94k
Adventure Escape: Asylum ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Adventure Escape: Asylum အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 32
ထုတ်လုပ်သူ Haiku Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.haikugamesco.com/privacy-policy.html
App Name: Adventure Escape: Asylum
File Size: 212.15MB
Release date: 2019-08-15 01:56:46
လက်မှတ် SHA1: 62:AD:7E:B8:7F:04:72:03:8E:88:C1:48:D6:0A:87:6F:BF:88:FF:AE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andrew Ow
Adventure Escape: Asylum APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ